MacOS Sierra: Top Five Waxyaabaha Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato About Apple ee Software New Mac
dalalkan oo Siri on Mac ah, aad hadda koobi karin wax ka dhexeeya kala duwan qalabka Mac iyo macruufka, aad desktop hadda ku nool daruurtii - iyo wax kasta oo loo tabbed karaa
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “MacOS Sierra: shan wax top aad u baahan tahay in la ogaado oo ku saabsan software cusub Apple ee Mac” waxaa qoray Samuel Gibbs, waayo theguardian.com on Tuesday 20 September 2016 13.32 UTC
OS X waa dhintay. Long live macOS. Apple ee version cusub ee nidaamka ka hawlgala Mac - Sierra - diyaar u noqon doonaa download dambe ee maanta.
hagaajinta The lacag la'aan ah waxaa laga heli karaa muddo ku dhow Mac kasta oo ka soo daahay 2009 iyo diyaar noqon doonaa via App Store Mac ah gelinkii dambe ee maanta. Iyadoo qaar ka mid ah doonayaan in laga yaabo in ay si degdeg ah u qabto off la xariirta, siiyaa dhib dhawaan la updates hore, halkan shan wax cusub in la helay by kuwa dooni in la beddelo si macOS Sierra.
Siri hadda waa la heli on your desktop ama laptop. Sawir: Apple
isbedelka ugu weyn ee Sierra kale oo aan ahayn magaca waa Siri. kaaliyaha ayaa cod isku mid ah ka iPhone iyo iPad hadda waa on Mac la sifooyinka iyo unu la mid ah. Waxaa ka heli kartaa faylasha aad isticmaalka luqadda dabiiciga ah sida soo bandhigay la El Capitan, ballamaha set, hubi dhawaaq, ciyaaro music iyo kuu sheegi cimilada, laakiin sida aad u isticmaasho waxay ku xiran tahay meesha aad ka shaqeysid: asxaabteena ee xafiiska-qorshaha furan yihiin ma xaqiiqada ah in aad kaliya bilaabay hadalka in aad computer jeclahay.
2. sabuurad Universal
sabuurad Universal macnaheedu waa in aad nuqul ka karaa mid mashiinka iyo paste kale oo aan u soo diri kasta oo files ama xidhiidhka ka dhexeeya labada. Sawir: Apple
Weligaa ma doonayay in ay paste wax u dhaxaysa laba Macs ama Mac ah oo iPhone ama iPad? Hadda aad awoodid. Just nuqul ka wax on makiinad, dhacay koollada oo dhinaca kale ah oo sug. Mararka qaar waxa ay qaadataa muddo ah, ku xiran tahay sida wanaagsan ee aad xiriir waa, laakiin waxa ay u shaqaysaa si lama filaan ah si fiican. Waxaa u shaqeeya qoraalka, images iyo waxyaabo kale oo laga yaabaa in aad ugu nuqul in sabuurad ah.
iCloud Drive qaada oo dhan files on your desktop dhexeeya mashiinada. Sawir: Apple
Iyadoo qaar ka mid ah waxaa soo habeeya oo kaydi dhammaan faylasha ay fayl si taxadar leh abaabulay, badan oo kaliya ayaa wax walba tuuray on desktop iyo qufulan on mashiinka hal. iCloud Drive desktop hadda ka codaysay kartaa files iyo fayl on desktop u dhexeeya mishiinada iyo in iPhone ama iPads, sidaa darteed wax walba oo aan soo abaabulay waxaa laga mishiinada kala duwan la heli karo.
4. Wax walba waa in tab a hadda
documents View iyo apps kale duwan-yahay suuqa kala aragtida tabbed, sida daawato video kisiga badan hogaanka waqti isku mid ah la sawir-in-sawir bandhigay. Sawir: Apple
interface The tabbed wadadii by daalacashada ayaa haatan u yimaadeen inay wax walba oo ka badan ama ka yar ee Sierra. From tifaftirayaasha text in photos sixiddiisa, apps miisaaniyada iyo email, garaacid ah "ku milmaan All Windows" option hoos Window wuxuu soo daadiyaa in bar xaaladda Galiyo daaqadaha ka mid app galay mid ka mid interface tabbed. Ma wax kasta oo isla markiiba taageertaa, iyo qaar ka mid ah in la sameeyo leeyihiin fulintii bar-dubay, laakiin haddii aad doonayay tabs meel kasta on a Mac, hadda fursad aad.
5. Apple Pay, macruufka 10 Tilmaamo iyo dheeraad ah
View xasuus aad Photos gudahood. Sawir: Apple
Marka laga soo tago sifooyinka weyn Mac, MacOS Sierra sidoo kale ku darayaa waafaqsan yahay badi qaababka cusub ka macruufka 10. Hadda waxaad ku bixin kartaa, waayo, waxyaalaha adiga oo isticmaaleya isticmaale ID Touch shidma on your iPhone on web, aad wax chat, malana diri karaa macruufka 10 users in Messages, videos view qabta Player Quicktime ee suuqa kala sabayn, iyo xataa furid aad Mac isticmaalaya Watch Apple ah, haddii aad leedahay mid ka mid ah. Apple Music ee iTunes haatan u muuqataa in ka badan sida version macruufka aad u, iyo Xusuusaha ka muuqdo ka app Photos macruufka hadda waa in Photos MacOS Sierra ah app. MacOS sidoo kale ballan qaaday in ay lacag la'aan ah ilaa iyo qaar ka mid ah meel on your Mac by kaydinta files la isticmaalin drive iCloud gudahood, laakiin sida badan meel u lacag la'aan karaan waxay ku xiran tahay noocyada of files qaadato kor u wadid aad u adag.
macruufka 10: hogaanka 10 waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Apple ee iPhone iyo iPad software cusub
"Labo Jibaarto Your Sales Arbacada In 30 Maalmaha!"
Facebook uga faaidaysan News geynta Feed si garaac popula ...
dadka isticmaala Windows XP laaluushay la $100 off Windows 8 ee ...
Windows 8 iibka waa hoos malaayiin on Windows 7
← Apple iPhone MUUJIYAY taraq 7 BlackBerry Si Jooji Samaynta Phones ! →